Iska horimaad dhimasho leh oo dhexmaray India iyo China - Tilmaan Media
Iska horimaad dhimasho leh oo dhexmaray India iyo China
Sarkaal iyo laba askari oo u dhashay dalka India ayaa lagu dilay “iska horimaad rabshad leh” oo ka dhacay xuduudda lagu loolamo ee dalkaas uu la leeyahay Shiinaha, waxaa sidaas sheegay ciidamada India.
India iyo Shiinaha ayaa toddobaadyadii tegay waxa ay ku lug lahaayeen is-mariwaa ka taagan Dooxda Galwan ee galbeedka Himilayas, ayada midba midka kale uu ku eedeynayey inuu dhulkiisa kusoo xadgudbay.
Ciidamada India ayaa sheegay in isku dhac uu dhacay Isniintii islamarkaana labada dhinac uu soo gaaray khasaare.
“Intii uu socday hanaan xiisadda lagu qaboojinayey ayaa waxaa iska horimaad uu ka dhacay Dooxada Galwan, halkaasi oo labada dhinac uu khasaare kasoo gaaray,” ayaa lagu yiri bayaanka ciidamada India.
“Khasaaraha nafeed ee India ayaa waxaa ku jira sarkaal iyo laba askari. Saraakiil ka socota labada dhinac ayaa hadda qaboojinaya xiisadda,” waxaa sidaas lagu yiri bayaanka ciidamada India.
India iyo China ayaa si kooban xuduudda ugu dagaalay 1962-kii, mana awoodin wixii markaas ka dambeeyey inay xalliyaan murankooda, inkasta oo ay wada-hadallo socdeen tobaneeyo sano.
Wasaaradda arrimaha dibedda Shiinaha ayaa ugu baaqday India inaysan qaadin tallaabo hal dhinac ah, ama aysan abuuri dhibaato.
Afhayeen u hadlay wasaaradda oo ku sugan Beijing ayaa sheegay in xadgudub weyn lagu smaeeyey heshiiskii labada dal, kadib markii ciidamada India “ay daan-daansadeen islamarkaana soo weerareen” shaqaale Shiinees ah, taasi oo dhalisay iska horimaad.
Dowladda Soomaaliya oo mar kale dib u dhigtay furitaanka duulimaadyada gudaha